OTU ESI EME KA AGBA AJA OJI NA OJI DI NA PHOTOSHOP - PHOTOSHOP - 2019
Chịchaa foto na-acha oji na nke dị ọcha na Photoshop
Na usoro nke iji iTunes na komputa, onye ọrụ nwere ike izute ọtụtụ njehie nke na-eme ka o sie ike ịkwụsị ọrụ ahụ. Taa, anyị ga-ebi na njehie na koodu 9, ya bụ, anyị ga-enyocha isi ụzọ ọ na-enye ohere iji kpochapụ ya.
Dị ka a na-achị, ndị ọrụ nke ngwa ngwa apple zutere njehie na koodu 9 mgbe emelite ma ọ bụ weghachi ngwaọrụ Apple. Njehie nwere ike ime n'ihi ihe dị iche iche: ma n'ihi usoro ọdịda, na n'ihi na ngwa ngwa ahụ na ngwaọrụ ahụ.
Ụzọ iji dozie koodu nje 9
Usoro 1: Reboot Ngwaọrụ
Mbụ, ihu na njehie 9 mgbe ị na - arụ ọrụ na iTunes, ị ga - amalitegharịa ngwaọrụ - kọmputa na ngwa Apple.
Maka ngwa elekere apple, a na-atụ aro ịmegharịghachi a manyere: iji mee nke a, jigide ike na igodo Home n'otu oge ma jide ihe dịka 10 sekọnd.
Nzọụkwụ 2: Melite iTunes gaa na nke kachasị ọhụrụ.
Disconnection n'etiti iTunes na iPhone nwere ike ime n'ihi n'eziokwu na ị nwere mbipụta nke oge mgbasaozi ejikọtara arụnyere na kọmputa gị.
Naanị ị ga-achọ maka iTunes maka mmelite na, ọ bụrụ na ọ dị mkpa, wụnye ha. Mgbe ị kwusịrị mmelite iTunes ahụ, akwadoro ka ịmalitegharịa kọmputa ahụ.
Hụkwa: Otu esi edozi iTunes na kọmputa gị
Nzọụkwụ 3: Jiri eriri USB ọzọ
Ndụmọdụ a apụtaghị na ọdụ ụgbọ USB gị adịghị n'usoro, ma ị kwesiri ịgbalị ịjikọ eriri USB gaa n'ọdụ ụgbọ mmiri ọzọ USB, ọ dịkwa mma izere ọdụ ụgbọ mmiri, dịka ọmụmaatụ, wuru n'ime keyboard.
Usoro 4: Dochie eriri
Nke a bụ eziokwu karịsịa maka eriri ndị na-abụghị nke mbụ. Gbalịa jiri eriri dị iche, mgbe niile na-enweghị mmebi anya.
Usoro 5: Naghachi ngwaọrụ site na ọnọdụ DFU
N'ụzọ dị otú a, anyị na-akwado ka ị melite ma ọ bụ weghachi ngwaọrụ site na iji usoro DFU.
DFU bụ ọnọdụ mberede pụrụ iche nke iPhone na ngwaọrụ ndị ọzọ Apple, nke na-enye gị ohere ịmeghachi ma ọ bụ melite ngwaọrụ ahụ.
Iji weghachite ngwaọrụ n'ụzọ dị otú a, jikọọ Ngwaọrụ na kọmputa gị site na iji eriri USB, malite iTunes, wee kpochapụkwa iPhone.
Ugbu a, ngwaọrụ ahụ ga-agbanye gaa na DFU mode site na ịme ihe nchikota ndị a: jigide igodo Ike (ike na) maka 3 sekọnd, wee, na-ahapụghị ya, pịa bọtịnụ Home (bọtịnụ center "Home"). Jide igodo abụọ ahụ maka 10 sekọnd, wee hapụ Ike ka ị na-ejigide bọtịnụ Home.
Ị ga-ejide bọtịnụ Home wee rue mgbe ozi na-esonụ ga-egosi na ihuenyo iTunes:
Iji malite usoro mgbake, pịa bọtịnụ ahụ. "Naghachi iPhone".
Chere ruo ọgwụgwụ nke usoro mgbake maka ngwaọrụ gị.
Usoro 6: Kwalite software kọmputa
Ọ bụrụ na ịnwebeghị Windows Windows ogologo oge, mgbe ahụ, ma eleghị anya ọ ga-aba uru ugbu a iji mee usoro a. Na Windows 7, mepee menu "Ogwe njikwa" - "Mmelite Windows", na nsụgharị nke usoro sistemụ, mepee windo ahụ "Nhọrọ" keyboard mkpirisi Na-emeri + mwee gaa mpaghara "Imelite na Nche".
Wụnye mmelite niile dị na kọmputa gị.
Usoro 7: Jikọọ Ngwaọrụ Apple na kọmputa ọzọ
O nwere ike ịbụ na kọmputa gị bụ ụta maka ọdịdị njehie 9 mgbe ị na-eji iTunes. Iji chọpụta, gbalịa ịjikọ iPhone gị na iTunes na kọmputa ọzọ ma soro usoro mgbake ma ọ bụ melite.
Ndị a bụ ụzọ bụ isi isi dozie njehie na koodu 9 mgbe ị na - arụ ọrụ na iTunes. Ọ bụrụ na ịnweghị ike idozi nsogbu ahụ, anyị nwere ike ịkpọtụrụ ụlọ ọrụ ahụ, ebe ọ bụ Nsogbu nwere ike ịdina na apple apple n'onwe ya.